Zaw Zaw Kyaw - The SPACE Language Academy
Zaw Zaw Kyaw
“မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် ဇော်ဇော်ကျော်ပါ။ ဘဏ်ဝန်ထမ်းတစ်ဦးပါ။ The SPACE Language Academy ကဖွင့်လှစ်တဲ့ Business English (Batch-1) မှာ တက်ရောက်နေပါတယ်။ Business English သင်တန်းကို လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသူများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများ အဓိက တက်ရောက်သင့်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အမှန်တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ vocabulary၊ grammar၊ emailing၊ telephone conservation၊ making appointments၊ report writing၊ business culture စတာတွေကို ဒီသင်တန်းမှာ သင်ယူရပါတယ်။4skills လုံး မျှမျှ တတ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ပိုပြီး အကျိုးရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အမှန်တကယ် အသုံးဝင်တဲ့ သင်တန်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။”
“Mingalabar, I’m Zaw Zaw Kyaw and I’mabanker. I’m doing business English course (batch-1) at the SPACE Language Academy. Business English is suitable not only for the current personnels but also for those who are preparing for their workplace. I can learn business vocabulary and grammar which are very handy in our business communication, emailing, telephone conversation, making appointments, report writing, business culture etc. We can practise4skills in balance onaregular basis. I fully recommend that this is suchauseful course for my career.”